Tayada Sare Warshad Mashiinka Samaynta Mashiinka Xawaaraha Sare ee Tayada Sare leh | Mashiinka Chengda
Shunda SMD-90 mishiinka koobka warqadaha caqliga leh ayaa adeegsanaya qaabeynta shaashadda, taas oo go'doominaysa qaybaha gudbinta iyo caaryada.Qaybaha gudbinta waxay ku hoos jiraan miiska, wasakh ayaa ku yaal miiska, qaabkani wuxuu ku habboon yahay nadiifinta iyo dayactirka.
Mashiinka wuxuu qaataa saliida lagu buufiyo otomaatigga, qaabdhiska gudbinta dhidibka dhaadheer, nooca foostada farsamaynta tilmaamida silsiladda iyo wadista qalabka, hubinta xasilloonida iyo tayada mashiinka oo dhan.
Qaybaha korantada, PLC, raadraaca korantada iyo quudinta adeegga ayaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo socodka. Awoodda mashiinka noocan ahi waa illaa 100-120pcs koob / min, oo ku habboon soo saarida 4-46 wiqiyadood oo koobabka qabow / kulul ah.
Soosaarka wax soo saarka ilaa 50,000 koob halkii wareeg (8 saacadood), ilaa 4.5 milyan oo koob bishiiba (3 wareeg);
Gawaarida gawaarida gawaarida, gawaarida gawaarida gawaarida, hagaajinta qaabka gudaha, si loo hubiyo saxnaanta gudbinta mashiinka, waxqabadka isdhaafsiga sare, si loo gaaro isku xirnaanta safarka si looga fogaado qaybaha dhaawaca shilalka, samee silsiladda gawaarida gawaarida iyo gudbinta ma aha mid siman Isku soo wada duuboo cillad la'aan.
Guud ahaan Qaab dhismeedka Kiiska
Naqshadeynta qaab dhismeedka xayndaabka mashiinka, ku shubista saliida lagu buufiyo saliida, yareynta duugista iyo jeexitaanka, kala-baxa kuleylka wax ku oolka ah, mashiinka si dhakhso leh ayuu u socdaa. Dammaanadda mashiinka muddo saddex sano ah.
Laba Hay'adood oo Curling ah
Curling-ka ugu horreeya ee leh ballaadhinta gudaha ee wax-ku-beddelka wareega, wuxuu ku habboon yahay hagaajinta awoodda sameynta warqadda; fikirka kuleylka ee curlingka labaad, mugga quruxda badan, xasiloonida cabbirka.
Nidaamka sawirka CCD
Soo ogaanshaha koobka (baaquli) mugga hortiisa iyo aagga gudaha ee wasakhda, kaneecada, qanjidhada, afka duudduuban oo qarxa, duuduubka. 2, koobka lagu ogaado (baaquli) gadaasha sagxadda hoose iyo meelaha jilicsan ee wasakhda, kaneecada, qanjirrada, jilicsanaanta, dhamaadka warqadda gubaysa ee huruudda ah, hoose ee bilaha, dhammaadka kala goysyada waraaqaha.
Nidaamka xakamaynta caqliga
1, qaab-moodal badan. Adeegso daaqada fudud ee daaqada si aad u hagto, xulo qaabka dejisan.
2, dejinta dhimaya jajaban. Waad dib u soo celin kartaa, soo celin kartaa, ama dib ugu soo celin kartaa halbeegga warshad. Waxaad sidoo kale wax ka beddeli kartaa xuduudaha gacanta si faahfaahsan.
3, dejiyeyaasha asalka ah ee loo yaqaan "encoder" iyo jihada otomaatiga ah ee toosan iyo is-baaritaanka cilladda Ku rakibida qalabka 'Encoder hardware' uma baahna inuu tixgeliyo goobta, si fudud ayaad u dejin kartaa barnaamijka.
4, si otomaatig ah u habeyn xoogaa baarkinka, wax ka yar hal laab oo dhakhso u hooseeya. Markii la qaabeeyo, mashiinku wuxuu si otomaatig ah u xisaabiyaa masaafada aan firfircooneyn ee mashiinka, ugu yaraan hal talaabo ka dhakhso badan booska ka dib hoos u dhaca.
5, nidaamka aaladda dareeraha saldhiga furaha xisaabinta otomaatigga ah iyo aqoonsiga. Iyada oo loo marayo hawlgal fudud oo lagu bilaabayo badhanka ayaa lagu wajihi karaa sameynta fashilaad, nidaamka si toos ah loola socdo calaamadda sida ku xusan dareeraha, caaryada ayaa si deg deg ah ugu istaagtay bartamaha labada kululeeye.
6, jooji koobka si otomaatig ah looga saaray. Ka dib marka mashiinku si aan caadi ahayn u istaago, nidaamku si otomaatig ah ayuu uga saari doonaa kululeeyaha iyo booska qaybta uu kuleeylka kululeeyaha dartiis u gubay saboolnimaduna aysan ahayn koobka adag.
7, nidaamka kuleylka xakamaynta heerkulka caqliga. Iyada oo loo marayo heerkulka xakamaynta PLC PID, isticmaalaha ayaa si fudud u doorta soo saaraha warqadda, miisaanka, hal / laba jibaar PE, nidaamku wuxuu si otomaatig ah u dejin doonaa heerkulka bartilmaameedka u dhigma, xawaaraha mashiinkuna wuu isbedelayaa marka heerkulka bartilmaameedka uu si toos ah u hagaajiyo. Isticmaaluhu sidoo kale wuu habeyn karaa bartilmaameedka xakamaynta heerkulka bartilmaameedka.
8, ogaanshaha cillada nidaamka muuqaalka. Aqoonsiga otomaatiga ah ee qaabka koobka warqadda, gudaha, cilladaha hoose, ka saarida otomaatiga ah. Algorithm gaar ah, aqoonsi wasakh khafiif ah waa sax oo xasilloon. Fure si dhakhso leh loogu dejiyo xuduudaha, laakiin sidoo kale wax ka beddeli kara cabbir kasta si faahfaahsan. Nidaamku wuxuu taageeraa warbixinta soo saarida kormeerka shabakadda gudaha.
9, nidaamka kormeerka qalabka. Meelaha wax soo saarka Plc, Relays, xiriiriyeyaasha, plc iyo shaashadda taabashada, plc iyo kombiyuutarka, plc iyadoo la ballaarinayo qadka kormeerka waqtiga-dhabta ah, qaylo-dhaanta aan caadiga ahayn ee shaashadda taabashada ayaa sababeysa cilladda. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qalabka kombiyuutarka iyo softiweerka, adeegsadaha sida ku cad jawaabaha si fudud loo xaliyo.
10, nidaamku wuxuu taageeraa casriyaynta fog. Plc iyo taabashada shaashadda iyada oo loo marayo isku xirnaanta Ethernet-xawaaraha sare, waad wax ka beddeli kartaa plc iyo taabashada shaashadda ip cinwaanka, iyada oo loo marayo NAT ama adeeg bixiyeyaasha kale si durugsan kor loogu qaado.
Hore: Warqad taageere / warqad / duudduuban warqadda hoose ee koobka warqadda ah
Xiga: Mashiinka Koobka Tooska ah ee STD-80